असार २८, २०७५ पत्रपत्रिका
काठमाडौं : कतिपय त बेहोस भए, अधिकांश परीक्षार्थीले प्रवेशपत्र पाउनै सकेनन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको अस्तव्यस्तताको कारण बुधबार ताहाचलस्थित काठमाडौं एकाइमा प्रवेशपत्र लिन आएका शिक्षकका परीक्षार्थीले सकस भोग्नुभएको थियो ।
शिक्षक सेवा आयोगले समयमै प्रवेशपत्र उपलब्ध गराउने स्थानको निक्र्यौल नगर्दा समस्या परेको थियो ।
कहिले परीक्षा केन्द्रमा त कहिले एकाइमा भन्दै अलमल परेको कारण हिजो बुधबार प्रवेशपत्र लिन पुगेका अधिकांश परीक्षार्थीले प्रवेशपत्र पाउन सकेनन् । यो खबर आजको ‘नेपाल समाचारपत्र’ राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ।
शिक्षक सेवा आयोग र एकाइको लापरबाहीको कारण प्रवेशपत्र लिन एकाइमा पुगेका परीक्षार्थी दिनभर भोकभोकै बस्नु प¥यो ।
‘धैरैलाई असहज भएको महसुस भयो, कतिलाई त शीतलमा राख्नुप¥यो’ –एकाइ प्रमुख नन्दलाल पौडेलले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार आयोगले समयमै तयारी नगरेको कारण समस्या परेको हो । आयोगले मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका १९ जिल्लाका परीक्षार्थीका एकाइबाटै प्रवेशपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
टाढाटाढाबाट आएका परीक्षार्थीले प्रवेशपत्र पाउन नसकेपछि शिक्षक सेवा आयोगविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए ।
आक्रोशित परीक्षार्थीले एकाइ कार्यालयको झ्यालको सिसा समेत फुटाइदिएका थिए । कमजोर व्यवस्थापनको विरोधमा नारावाजी गरेका थिए । भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई हम्मेहम्मे भएको थियो ।
सुरक्षा दिन एकाइ कार्यालय आएका प्रहरीसमेत कार्यालयको मूल गेटबाट प्रवेश गर्न पाएका थिएनन् ।
पटकपटक विवाद र नाराबाजीबीच एकाइले हिजो करिब १ हजार परीक्षार्थीको मात्र प्रवेशपत्र वितरण गरेको छ ।
सयौंको संख्यामा रहेका परीक्षार्थीलाई व्यवस्थित र संयमित हुन एकाइले शिक्षकलाई आग्रह गरेको थियो ।
हिजोको भीड थेग्न नसकेपछि एकाइले आज बिहीबार निमावि र मावि तहको एकाइ र प्रावि तहको सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रबाटै प्रवेशपत्र वितरण गर्ने सूचना जारी गरेको छ । शुक्रबार निम्न माध्यमिक र माध्यमिक र शनिबार ३० गते प्राथमिक तहको परीक्षा हुनेछ ।
प्रकाशित : बिहिबार, असार २८, २०७५०७:५२
संसदीय दलको नेता बन्दै देउवा!
अल्लारे प्रेमले १३ वर्षको कलिलो उमेरमै गर्भवती, फाल्नु कि पाल्नु !
५ वर्षभित्रै यसरी काठमाडौँको चक्रपथ परिक्रमा मोनो रेलबाट गर्न पाइने !
यी दुई शीर्ष नेताको निर्देशनपछि कानुनमन्त्रीले दिए राजीनामा
नेकपा प्रदेश कमिटी घोषणा : १, ३८६ नेताले पाए जिम्मेवारी, कैदीलाई पनि जिम्मेवारी
यो पुष महिनाको पहिलो हप्ता तपाईका लागि शुभ-अशुभ कस्तो रहला ? पौष १ गतेदेखि ७ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
बाबु-आमासंग अन्तर्वार्ता लिएको भन्दै सावित्री सुबेदीले दिईन पत्रकारलाई ज्यान मार्ने धम्कि, अडियो भाइरल!
३६ मिनेट अगाडि PARWATI
लागूऔषध कारोबारमा संलग्न ३ जना महिला पक्राउ !
२०७६ सालको दसैँ असोज १२ गतेदेखि नै शुरु , कुन चाड कहिले ? हेर्नुहोस्
श्रीमान विदेश गएपछि “नाठोसँग” मस्ती, बच्चा जन्मिएपछि हत्या गरी खाल्डोमा ! आमा पक्राउ !
खुसीको खबर, घट्यो सुनचाँदीको मुल्य!
ओली र दाहालबीच भैंसेपाटीमा गोप्य बैठक ! भित्र-भित्रै गरे यस्ताे सहमति !
विद्यार्थी बिरामी भएपछि विद्यालयमा बोका काटेर भोज !